Ogaden News Agency (ONA) – Dhulka Ethiopia ma boobiyo dhacbaa mise dano kale ayaa jira!
Dhulka Ethiopia ma boobiyo dhacbaa mise dano kale ayaa jira!
Posted by ONA Admin	/ November 13, 2011
Wargeyska caanka ah ee ka faalooda dhaqdhaqaaqa UN-ta iyo maalgalinta ee loo yaqaano IPS ayaa waxa uu ka faalooday dhulka Ethiopia ee taliska TPLF sheegeen inay ka kireeyeen shirkado dhulka beerta waxayna cinwaan uga dhigeen dhulka Ethiopia ma boobiyo dhacba mise dano kale aya jira.
Qormadan oo ay muddo ku daba jireen siday kuheli lahaayen wararka dhulka Ethiopia ee xooga looga qaatay beeralaydii Ethiopia ayaa waxa wargeysku uu nasiib u yeeshay innuu gudaha beeraha la sheegay in laga gatay haayado shisheeye ay kaso waramaan. su’alana ay soo weydiyaan dadka dhulkaas dagan iyo siday u arkaan.
Wargeysku waxa uu soo xaqiijiyay in dhul aad u badan laga kireeyay dowlado shisheye sida karatori oo iyagu dhacay dhul kaweyn wadanka Luxemberg oo lagu qiyasayo illa 300,00o higtor. Waxa shirkadan ay rabta muddo saddex sanno gudahood ah inay faa ido ka hesho dhulkaas gaadhaysa malaayiin dollar ah.
Haddaba dadki dhulka dagana maxaa ku dhacay
Wargeyska waxa uu soo saaray sawiro aad u naxdin badan oo tilmaamaya dadkii dhulka daggana oo xoog looga raray. laguna barokiciyay qorshe ay dowlada TPLF dajisay oo ah in dadka meelo kale loo qixiyo oo ka fog dhulka laga gaday ajanabiga. dadka ayaa lagu qasbay inay si qasab ah u oggoladan in ay guraan. Waxa kale o wargeysku soo saaray sawiro muujinaya ilmo yaryar oo dadoodu gaadheyso 8 sanno oo ka shaqeynaya beeraha hindigu leeyahay e karatori.
Taliska TPLF ayaa caalamka u sheegay isaga oo kaligi Taliye Zenawi uu sheegay in dhulka Ethiopia uusan noqon doonin dhul dulucdisa qurxoon kaliya la daawado dadkiisuna ka gaajoodo, waa beerayna dadkan ajanabiga ahna cunno ayay noo soo saarayaan iyo lacag badan oo ka helno shirkadahaas. Waxa kale oo uu sheegay inay horumar gaadhsiinayaan wadanka ethiopia.
haddaba shegashada KT Zenawi waxa beeniyay dadkii dhulka xooga looga qaatay lana bara kiciyay. Wargeyska ayaa waxa uu isbarbar digay dhulka Ethiopia oo dadkiisu 80% ku noolyihiin beeralay, dadku waxa ay beertooda ku fashaan Dibi iyo qalab duug ah. OJAWATO ayaa ah isagu nin kamid ah shacabka Ethiopia ee dibida wax ku fasha waxa beertiisu ku taala meel u dhow beerta weyn ee hidiga. Ojowato beertiisa haduu dhex lugeeyo muddo ka yar laba daqiiqo ayuu beerta ku talaabaya halka ninka Hindiga ahi beertiisa uu dhex socdo isaga oo watta gaadhi aad u orod badan oo Jiib ah- ay ku qadaneyso inuu beertisa ku gudbo muddo saacado badan ah.
Ojjowato waxa uu aad uga xunyahay beerta weyn ee Hindiga lasiiyay oo waxii kasoo go’a loo dhoofin doono dibadaha iyada oo dadka Ethiopia aysan dheefsan doonin raashinka kaso go’a beertaas. Dadka Ethiopiana wali waxa ay ku hoos noolyihiin mucawamada raashinka ah ee looguso tabaruco ee Aid-ka lo yaqano. Ojjowato waxa uu yiri marki hore waxa lanoo balan qaaday inay Electrik iyo Biyo iyo cusbitaalo ay noo keenayaan shirkadahan shisheeye oo dadka iyo dhulkaba la maal galinayo. intaas midna maysan dhicin waxa kaliya oo shaqo ka helay dad tiro yar oo nagamid ah kuwaasna mushaar aad u yar ayay ku shaqeyaan.
Beerta karatori waxa lagu arkay oo u badan dadka ka shaqeeya caruur da’doodu ka hooseyso 8 sanno kuwaas oo la siiyo mushaar cenitimo ah. Ojjowato inkasto oo ciyaalkisa haddii ay shaqo ka helaanbeerta ay reerkiisa dhanka dhaqalaha ka caawin laheyd hadana uma uu oggolla in ciyaalkisu ka shaqeyaan beertaas. Waxuuna Ojjowato yiri caruurteyda waxaan la raba maalin maalmaha kamid ah inay noqdaan Dhaqtar ama Ingineero sidaas awgeed waa inay aadan waxbarashada.
Dadku isku mid maahane qoysaska u dhow beerta hindiga waxay caruurtoda u diraan inay kasoo shaqeyan beerta hindiga ah. Maamulaha Dugsi u dhow beerta karatori ayaa waxa uu u sheegay wargeyska in ardeyda schoolkisa oo dhan ay u shaqo tageen beerta hindiga. Waxaana dhacda fasalkii schoolka soo gali jiray 60 ardey inay kuso hadhaan oo soo xaadiraan 5 ardey kaliya.
Dhibatada lasoo gaadhsiiyay jiilka da’da yar waxa dheer in dhulka gambella la gubayo oo la banneeyay. Dhulka Ethiopia 40 sanno ka hor dhulka ethiopia waxa uu aha 40% dhul caggaar ah oo keyn iyo geedo leh hadana waxa caggaar ah oo geedo leh kaliya 3%. Sidoo kale dadki dhulkaas daggana gambela waxa loo qixiyay goobo kale.
Dhulka la gadayo ee shirkadaha shisheeya laga gaday kuma koobna kaliya dhulka gambella waxase jirta dhulbadan oo kamid yahay dhulkeena Ogadeniya in lasiiyay shirkado shisheeye si ay u qottaan. Dhulka ogadeniya waxa sido kale jira in dhulki la gubay lana baneeyay oo loo diyaarinayo shirkado kuso guura. Waxa kale oo boqolaal kun oo somalida ogadeniya ah lagu qasbay in laga kaxeeyo goobihi ay daganayeen.
Shacabka Somalida Ogadeniya waa inay ku baraarugaan xaalufinta ay isku dayayso Taliska daciifka ah ee Ethiopia oo hadda ka hor ku guul dareystay waqtigi Kuuba innuu dhulka Ogadeniya soo dajiyo dad shisheeya ah oo aha iyagu Beeraladeyda qowmiyadaha kore ee daga dhulka sare ee Etihiopia. Islamarkaasna uu dhaqan ragggo bulshada dhaqanka Somalinimo ku adag iyo diintooda Muslimka ah.
Waxaa jira dad badan oo ka mid ah qowmiyadaha ethiopia oo dhibaatada ay shacabka ogadeniya qabaan la wadaaga. Waxana rajeynaynaa in beesha caalamku ay xoojin doonto kaalmada bani aadanimo ee dadka ree Gambela ee isdifaci karin iyo qowmiyadaha kale ee ku hoos nool gumeysiga madow ee Abbysinia.
Marka hore allahi naga dhigay dad caqli leh o wax darema ayaa mahad oo dhan iska leh marka xigta waxaa mahadsan dhamaan bahda shabakada OGADEN NEWS AGENCY…. Walalayal runtu waxey tahay in dhulkeena la gatay oo laxalufinayo dhirtii tusaale ahaan wuxuu guumaytuhu ku tala jiraa in la baneeyo oo dhirta laga guro dhul aad u weyn oo isku wareeg ah waana suubaanka u dhaxeya DHOBAWEYN IYO SHILABO Oo ah dhul weyn marka walalayal aynu ka hor tagno gumaysiga waynu guuleysan insha’alah